Garoowe oo si wayn loogu diyaar-garoobayo xuska sannad-guurada 13-aad ee 1-da Ogoosto. – Radio Daljir
Luulyo 30, 2011 12:00 b 0
Garowe, July 30 – Waxaa magaalada Garoowe ee xarunta Puntland si weyn looga dareemayaa u diyaar-garowga xuska 1-da August oo ku beegan maalintii la aasaasay Puntland.
Waxaa aad loo adkeeyay ammaanka caasumadda Garoowe, waxaana wadooyinka, fagaaraha barxadda iyo xarumaha dawladda lagu arkayaa ciidamo ku labisan dareyska ciidanka bileyska, kuwaasoo sugaya ammaanka, isla markaana wada hawlgallo baaritaano ah.
Waddooyinka, goobaha ganacsiga, xarumaha dawladda, iyo xaafadahaba waxa lagu arkayaa boqolaal dadweyne kuwaasoo ku labisan dareyska calanka Puntland.
Meelo badan oo ka mid ah magaalada Garowe ayaa waxaa aad loo qurxiyay bilicdooda, waxaana muuqata isbadel farshaxaneed oo ka qayb-qaadanaya xuska 1-da Augusto.
Baallayaasha korontada ee laamiga wayn ee dhex mara Garowe ayaa waxaa ka wahlanaya calanka buluuga ah ee Soomaaliya iyo kan Puntland.
Guddiga qabanqaabada munaasabadda 1-da August ayaa maanta oo (Sabti) ah sameeyay tijaabaddii kamadambaysta ahayd ee diyaar-garoowga dabaaldegga 1-da August oo ku aaddan maalinta Isniinta ah ee soo aaddan.
Gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xuska 1-da August, ahna wasiirka hormarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland Marwo Caasho Geelle Diiriye ayaa wareysi gaar ah oo ay siisey Radio Daljir ku sheegtey in qof walba oo reer Puntland ah uu waajib ka saraan yahay dabaaldegga xuska, loogana baahan yahay shacabka in indhahoodu ay furnaadaan, isla markaana ka qayb-qaataan sugidda ammaanka Puntland.
Marwo Caasho oo ka jawaabaysa dareenkeeda ku aaddan sida ay isugu soo beegmeen xuskan sida gaarka ah loo agaasimay iyo macaluusha ba’an ee kataagan Koonfurta Soomaaliya ayaa muujisay in ay dadka iyo dawladda Puntland gudo iyo dibadba si wayn ugu gurmadeen dadka ay aafadu haleeshay isla markaana ay Puntland ka furan yihiin xeryo loogu tala-galay barakacayaasha. Dhinaca kalena, Marwo Caasho waxa ay sheegtay in dadka Puntland ay iyagu u heellan yihiin in ay xusaan maalmaha ku wayn.
1-dii bisha August ee sannadkii 1998-kii ayaa Garowe lagu asaasay dawlad-gobaleeka Puntland, tan iyo intii xilligaa ka dambeeyayna waxa sannad walba laga xusi jiray 1-da August, inkasta oo sannadkan dabaal-daggu u muuqto mid si wayn uga baddalan kuwii hore.
Kooshin Daljir Garowe http://daljir.com/